Qaraxyo xoogan oo ka dhacay Mudug iyo Wararkii ugu dambeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxyo xoogan oo ka dhacay Mudug iyo Wararkii ugu dambeeyay
Wararka aan ka heleyno deegaano ka tirsan Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas saqdii dhexe xalay laga maqlay jugta qaraxyo xoogan oo loo maleynayo inay ahaayeen kuwo miino ah.
Dadka deegaanka Bacaadweyne ee Mudug oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa u sheegay in qaraxyadaas oo laba ahaa lagu burburiyay Ceel biyood ku yaalla tuulo hoostegta deegaankaas, kadib markii lagu xiray qaraxyada.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in qaraxyadaas ay ka dambeeyeen xubno ka tirsan Al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegay inay dhaq-dhaqaaqyo ka wadeen inta u dhexeeysa Bacaadweyne iyo deegaanka Shabeellow ee Gobolka Mudug.
Dabayaaqadii sanadkii tegay ee 2020 dagaal u dhexeeyay dadka deegaanka Shabeellow iyo Al-shabaab ayaa dhacay halkaas, isla markaana geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sidoo kalena dagaalkaas ay qeyb ka ahaayeen Ciidanka dowladda.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidamada dowladda iyo Maamulka Gobolka Mudug oo ku aadan qaraxyadii xalay lagu burburiyay Ceel biyoodkii ku yaalay inta u dhexeeysa Bacaadweyne iyo Shabeelow oo ay ku sugan yihiin Al-shabaab.
Afhayeenka Ciidanka Booliska oo ka badbaaday Qaraxii Caawa ka dhacay Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo aqbalay Codsi xasaasi ah oo uga yimid Qoorqoor